Ukukhula koPhando lweFowuni | Martech Zone
Ukukhula koPhando lweFowuni
NgoLwesithathu, Oktobha 24, 2012 NgeCawa, uJuni 21, 2015 Douglas Karr
Ukuba newebhusayithi ephathekayo ngokwenene ayisiyiyo inketho kwaye akufuneki ukuba ibeyi-upsell ngabaphuhlisi bewebhu kwezi ntsuku. Kudala sisebenza kwiinguqulelo zeselfowuni zazo zonke iisayithi zethu kunye neendawo zabaxumi kangangeenyanga ngoku kwaye kuyahlawula. Ngokomndilili, sibona ukuba ngaphezulu kwe-10% yeendwendwe zabaxumi bethu zifika ngesixhobo esiphathwayo. Vula Martech Zone, Elungiselelwe izixhobo eziphathwayo, siyabona ngaphezulu kwe-20% yetrafikhi yethu ivela kwifowuni okanye ithebhulethi!
IWebhu ephathekayo yindawo ekhula ngokukhawuleza kwi-intanethi. Ikhaya ukuya ngaphezulu kweebhiliyoni ezi-4 ezixhunyiwe ii-smartphones, amanani-nkcazo abonisa ukuba ukusetyenziswa kwefowuni kuya kudlula ukugcwala kwedesktop ngo-2014. Oku kuthetha ukuba nokuba uqhuba luphi uhlobo lweshishini, abaphulaphuli bakho bakwiwebhu yeselfowuni, kwaye kufanelekile ukuba ufikelele kubo.
Kukho isimilo esithile kutyelelo olushukumayo olwahluke mpela kulundwendwe oluqhelekileyo lwewebhu. Abaphandi abahambahambayo abahamba kwindawo yakho bahlala ngokutyelela ishishini lakho okanye uphando malunga nokuthenga abaza kukwenza. I-AlchemyViral idibanise le nto inolwazi kakhulu I-infographic kulwakhiwo lwefowuni.
tags: amengcekwi-infographicinfographic yeselulaUkulungiswa kwefowuniUkulungiswa kwefowuniuphendlo lweselfowuniizibalo zophendlo lweselfowuniimobile seoSEO
Ngaba uyabona oko kulandwa nguGoogle?
UGoogle wokuQinisa ubuNini boBaphathi beeWebhu